धनलाभ हुनुअघि देखिन्छन् यस्ता संकेत ॐ लेखी पुरा पढ्नुहोस – Sandesh Press
धनलाभ हुनुअघि देखिन्छन् यस्ता संकेत ॐ लेखी पुरा पढ्नुहोस
May 29, 2021 240
काठमाण्डौ । धेरैजसो शुभ र अशुभ हिन्दू धर्मशास्त्रमा हुने गर्दछ । हिन्दु धर्मशास्त्रको मान्यतालाई अहिलेको वैज्ञानिक समयले नमान्ला त्यो एउटा कुरा हो । तर केहीले भने यस्ता कुराहरुलाई सही मान्छन् । र जीवनका विभिन्न कालखण्डमा आउने विभिन्न संकेतले शुभ र अशुभ कुराबारे जानकारी दिने धर्म शास्त्रहरुलाई विश्वास गर्दछन् ।
जस्ले विश्वास गर्दछ त्यसले त्यस्ता संकेतमा भविष्यमा हुने घटना परिघटनाका बारेमा सूचना प्राप्त गर्न सक्छ । यस्तै खालका संकेतकामा सपना पनि एक माध्ययम हो । केही संकेत यस्ता हुन्छन जसले हामीलाई धन प्राप्त हुने बारेमा पहिले नै बताई दिन्छन् ।
त्यस्ता संकेतलाई बुझ्न आवश्यक हुन्छ । र यो जो कोहीको क्षमताको कुरा पनि होइन । केही यस्ता संकेत छन् जसले भविष्यमा कसरी धन प्राप्त हुन्छ भन्ने कुराहरुको बारेमा पहिलेनै संकेत दिने मान्यता रहेको छ ।
तपाईँलाई यदि धनलाभ हुनु छ भने विहीबारको दिन कुनै कुमारी कन्यालाई पहेँलो बस्त्रमा देख्नु भयो भने त्यसलाई शुभ संकेत मान्नुहोस् । तपाईलाई धन लाभ हुन सक्छ । यदी तपाईंको दाहिने भागमा या सिधा हातमा लगातार चिलाई रह्यो भने सम्झनुहोस् तपाईंलाई धन प्राप्त हुन सक्छ ।
Prevआज मेघगर्जनसहित वर्षा हुने, यी चार प्रदेशमा हावाहुरीसहित हिमपात र भीषण वर्षाको सम्भावना
Nextखाने तेलको मूल्य बढाउने दुई उद्योगलाई तीन-तीन लाख जरिवाना
संक्रमित सनी लियोन ठूलो तनावमा, भन्छिन् ‘जतिबेला पनि डर लागिरहन्छ’
भर्खरै आयो दुखद खबर भारी वर्षापछि आएको बाढी, पहिरोका कारण ११ को मृत्यु, २५ बेपत्ता
जिरे खुर्सानिका मुखाँ हानु जस्तो शिवहरि पौड्याल (9822)
सं’ क्रमित शिवहरि पौड्यालको स्वास्थ्य वि’ग्रिए पछि आ’ इसियुमा राखेर उ’ पचार सुरु (2826)
सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! (2697)
केएमसी अस्पतालमा एकदिनको अन्तरालमै दम्पतिको मृत्यु, ६ वर्षीया छोरीको भावुक सन्देश! (1778)
रमेश खरेल को’रोना सं’क्रमण (1572)
मन्त्रिको गाडी समात्ने बहादुर प्रहरी, भन्छन- ‘ठूलो सानो भनेर जो कोहीको पनि छोड्ने कुरा हुँदैन’ (1564)
यसरि भयो पशुपति आर्यघाटमा उज्वलको अन्तिम संस्कार (केहि तस्विर सहित) (1338)
श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन श्रीमती ? जानी राखौ (1332)
केहि मिनेटको अन्तरालमा जन्मिएका जुम्ल्याहा दाजुभाई एकैपटक संसार छोडेर गए (1321)
बुवाको मृत्युमा भावविह्वल भएका ज्योतीष हरिहर अधिकारीको हात एकछिन पनि छोडिनन् नीताले (भिडियो हेर्नुस्) (1294)
कहिल्यै पनि प्रयोग नगर्नुहोला अरुका यी ६ चीज, नत्र बेहोर्नुपर्ला धनको नोक्सान
विवाहित महिलाले भूलेर पनि नगर्नुहोस् यी काम, नत्र पतिमाथि आउँछ संकट
आहा ! आमा-छोरिको माया , अनिता र छोरी यसरी रमाइलो गर्दै (हेर्नुस् भिडियो)